नेपाल आज | अतिले नगरोस् खति
अतिले नगरोस् खति
शुक्रबार, ०६ भदौ २०७६ गते प्रकाशित - नेपाल आज (ADM)
कन्फ्युसियसलाई सोधियो– ‘तपाईंलाई राष्ट्रिय सरकारको प्रमुख बनाइयो भने पहिलो काम के गर्नुहुन्छ ?’ प्रश्न झर्न नपाउँदै उनको उत्तर थियो– ‘निसन्देह पहिलो काम भाषाको सुधार हुनेछ ।’ आफ्नो आशय थप प्रष्ट पार्दै भने– ‘भाषा ठीक भएन भने जे भन्न खोजिएको हो, ठीक अर्थ लाग्दैन । अर्थ नखुलेपछि त्यो काम पनि हुन पाउँदैन । गरिनुपर्ने काम हुन नसकेपछि नैतिक मान्यता र कला अधोगतिमा जान्छन । यसको परिणामस्वरुप न्याय व्यवस्थाको स्थिति बिग्रन्छ । यसबाट मानिसहरु भयावह अन्योलमा पर्छन । त्यसो हुँदा जे भनिने हो, त्यसमा स्वेच्छाचारिता अपनाइन हुँदैन । अरु सवैभन्दा यो महत्वपूर्ण कुरा हो ।’
गर्नुपर्ने धेरै छ तर प्राथमिकता व्यक्तिपिच्छे फरक छन् । एउटाले भनेको अर्कोलाई चित्त बुझ्दैन । त्यसो त सबैलाई चित्त बुझ्ने चीज संसारमा सृष्टि भएकै छैन् । प्रधानमन्त्रीका कुरा सुन्दा प्रधानमन्त्री सर्वोत्कृष्ट । अर्का अध्यक्ष प्रचण्डको त बोलाईमै दम, नपत्याउने कुरै भएन । प्रतिपक्षी त झन् जनताकै खातिर भोक, निद्रा मारेर बसेको त्यो पार्टीका नेताको भाषण बेठीक हुने कुरै भएन । सेना, पुलिस, न्यायालय, शिक्षा, स्वास्थ्य सबै क्षेत्रका मठाधीशका कुरा सुन्यो भने उनीहरुले गरेको त्यागको उत्कर्ष नै अहिलेको परिणाम हो । यदि उनीहरुले राष्ट्रप्रति ऋण नलगाइदिएको भए सृष्टि ठाउँका ठाउँ रोकिने थियो । ठूटे नेताका त दलील नै अलग, उनीहरुको जेल, नेलकै कारण त हो– नेपाली जनताले विना रोकतोक अक्सिजन उपभोग गर्न पाएको । फेसबुक खोल्ने जति सबै नेता । चेतावनीको शैलीमा धम्कीको भाषा नबोल्ने कोही छैन् ।
एउटाको बोली अर्कोलाई पच्दैन । अदब कुन चराको नाम हो, थाहा छैन् । कसैको पतनमा आफ्नो उन्नति देख्नेको दबदबा बढ्दो छ । बाउ विरुद्ध छोराको खुराफात, आमा विरुद्ध छोरीको सक्रियता । आमाले अचानोमा राखेर सन्तान गिँडेको समाचार आउँछ । छोरी भाडाका मान्छे खोजेर आमा मार्छे । सात वर्षको बच्चा सुसाईड नोट लेखेर आत्महत्या गर्छ । जीवनमा एक हजारको नोट नदेखेकी जेठीका नाममा एक करोडको जीवन वीमा गरेर कान्छीको सिन्दुरको कसम खाएर लोग्नेले जेठीलाई जंगलमा भाडाका टट्टु लाएर मार्छ । दुई तिहाईका नेताहरु पुलिसको साईरनमा कुदिरहँदा एउटा टेलिभिजन प्रस्तोतालाई राजनेता मानेर हजारौंको भीड पछि लाग्छ । देश समृद्धिको यात्रामा जाँदा यस्तै अक्कर हिँड्नु पर्ने हो ? आखिर किन यी दृश्यले कसैलाई पोल्दैन । समाज कता जाँदैछ ?
समाजका डाक्टर मानिने समाजशास्त्री मुखमा ताल्चा लगाएर बस्छन् । यस्तो अवस्थामा देश गुज्रिरहँदा छातीमा हात राखेर आफूले आफैंलाई सोधौं– ‘नेपाल राज्य अब यस्तो भाँड राज्य भइसकेको हो कि सरकारका प्रमुख अंग कार्यपालिका, न्यायपालिका र व्यवस्थापिका निस्तेज भइसकेका हुन ? जबदेखि कुनै लहडीले जाँड खाएका तालमा ‘प्रहरी मेरो साथी’ जस्ता अभियान शुरु गर्यो नि त्यहाँदेखि प्रहरी नभएर अपराध चाहिँ साथी हुन थालेका हुन् । पहिला पहिला चिनेको पर्याप्त हुन्थ्यो तर अब किनेको जस्तो भरपर्दो केही हुन्न । नेपाली जीनमा त्यो तागत लुकेको हुन्छ, जसले डोनाल्ड ट्रम्प, नरेन्द्र मोदीलाई काका, बडाउको नाता प्रमाणित गरेर ल्याइदिन सक्छ । प्रहरी साथी, सेना सोल्टी, प्रधानमन्त्री बाउ, मुख्यसचिव सम्धी राज्यप्रणालीसंग यस्तै ठट्टा गाँसिदै गएपछि दशकौंदेखि देश धान कुट्ने मिलको फिता घुमेको जस्तो एउटै गतिमा सीमित छ । हेर्दा घुमेको पनि छ तर दूरी नाप्दा जहाँको तहीँ । देशको स्थायी संयन्त्र यस्तो छ– घुस नखाई र घुस नख्वाई धरै दिँदैन । बरु यो देशबाट कुनै दिन अख्तियार खारेज भएर जाला, तर भ्रष्टाचार एक, दुई, तीन रोकिदैन ।
यदि शेरबहादुर देउवा, बाबुराम भट्टराई, माधव नेपाल, झलनाथ खनाल प्रधानमन्त्रीको कुर्सीमा अहिले थिए भने बोलीचाली, दैनिकी, भेटघाट, काम वर्तमान प्रधानमन्त्री ओलीको भन्दा एक ईन्च फरक हुने थिएन । नेपालको राजनीति म्यूजिकल चियरभन्दा फरक कहिल्यै भएन ।
व्यक्तिलाई देवत्वको उपाधी दिने र कालान्तरमा खुइल्याउने प्रवृत्ति समाजको गहना बन्दै आएको छ । त्यो प्रवृत्तिमा मिडियाले मतियारको भूमिका निर्वाह गर्दै आएको छ । राजनीतिक रस्साकस्सी र उहापोहमा मिडिया कति बहकिनु हुन्छ ? त्यसको लेखाजोखा हुनु जरुरी छ । आफ्नो पेशागतभन्दा पनि अलग विषयमा महत्व खोज्ने एकप्रकारको हानाथाप चल्दै आएको छ । शिक्षकलाई अध्यापनमा विश्वास छैन । डाक्टर विरामी जाँचेर सन्तुष्ट छैन । पत्रकारलाई विशुद्ध पत्रकारिता पोसाउन छाडेको छ । व्यापारी तथा मिडिया सञ्चालकहरु देशको राजनीति आफ्नो कब्जामा रहेको भ्रममा बाँच्ने गरेका छन् । जसको प्रभाव समाचार घटना दुर्घटनाबाट सृजित नभएर बनाइन थालेको छ ।
एउटा मोटर सुनकोशी, त्रिशुली या कर्णालीमा झर्यो भने मर्ने यात्रुहरुको संख्या बढाउने प्रतिस्पर्धा बढेको देखिन्छ । भएका मिडिया जिम्मेवार र जवाफदेही हुन नसकिरहेका बेला बाढीसरह खुलेका अनलाइन पत्रिका र यूटुब च्यानलको गैरजिम्मेवार गतिविधि अत्यासलाग्दो छ । एउटाले उत्पादन गरेको समाचार झन्झन् रहस्यपूर्ण बनाएर घटनालाई आनको तान फरक बनाउनु उनीहरुले आफ्नो धर्म सम्झने गरेका छन् । एउटा झूटो समाचारलाई सत्य बनाउन लाखौं हात तयार भएर बसेको छ । कुनै मिडिया त्यही व्यक्तिका लागि आरती लिएर अघि सर्छन त कुनै धारेहात लगाएर तीनपुस्ता सराप्न तयार हुन्छन् । उसको विगतले आगत निर्देशित गर्दैन । त्यसमाथि राज्यको कानुन प्रक्रिया पालना गरेर आएको मान्छेलाई उसको कर्म नहेरी सराप्न तम्सनु भनेको त्यो जीब्रोमा नुन बोकेर तरकारी चाख्न तयार हुनु जस्तै हो ।
भारतीय प्रधानमन्त्री इन्दिरा गान्धी आफ्नै अंगरक्षकको गोली प्रहारबाट मारिइन । दक्षिण एशियाकै राजनीतिमा ‘देवी’ को उच्च कद बनाएकी इन्दिरा गान्धीको हत्या आफैंमा अझै आठौं आश्चर्य थियो । हत्याको विषयले भारतीय राजनीतिमा एक किसिमको ज्वालामुखी नै विष्फोट भएको थियो । अनपेक्षित घटनाले एकातिर कोकोहोलो मच्चिएको थियो भने अर्कातिर राजनीतिकी उच्च धरोहरमाथि भएको अनपेक्षित प्रहारले पुरै हिन्दुस्तान आहत थियो । जो कोही जन आक्रोशित थिए । हत्याको विषयलाई लिएर भारतीय सञ्चारमाध्यमहरु स्वभावतः आक्रामक शैलीमा उत्रिए । खालखालका टिकाटिप्पणी र विश्लेषण हुन थाले । यसै मेसोमा अल इण्डिया रेडियोका प्रस्तोताले आगोमा घिउ थप्दै शिख समुदायको व्यक्तिबाट गान्धीको हत्या भएको भनेर फुकिदिए । अब के थियो र ? हरेक शिखमाथि आक्रमण र धरपकड शुरु हुनथाल्यो । शिखका घरमा आगो झोस्न थालियो । कतिलाई निर्मम तरिकाले मारियो । हजारौं शिख ज्यान बचाउन विदेश पलायन भए ।
गान्धीमाथि गोली दाग्ने कुनै समुदायको नभएर त्यो फगतः अपराधी थियो । अपराधीको न कुनै जात, धर्म, सम्प्रदाय नै हुन्छ । अल इण्डिया रेडियोका एउटा प्रस्तोताले सावधानी नअपनाउँदा अपूरणीय क्षति भयो । हजारौ बेघरबार भए । निर्दोष मारिए । समयले त्यो घाउमा खाटा बसाउँदै गयो । त्यो बेला बेलायत, युरोप, क्यानाडा भासिएका शिखहरु अहिले उद्योगी व्यवसायी बनेका छन् । विदेशी भूमिमा रोजगारदाताको चिनारी बनाएका छन् । तर नैतिकताको एउटा प्रश्न अझै खबरदारी गरिरहेको छ– ‘कलमको हतियार उज्याएर मानवताविरोधी यस्ता कर्म गर्ने चाहिँ अपराधी हैनन ? यिनीहरु कानुनको दायरामा आउनु पर्दैन ?’
नेपालमा दैनिक सय रुपियाँको कमाई गर्ने मजदुरले दश रुपियाँ पत्रिकाका लागि छुट्याउँछ । विहानै उठ्नेवित्तिकै चियाको तलतलसंगै समाचारको भोक मेटाउन झुप्रोदेखि महल एकसाथ ब्युँझन्छ । काठमाडौमा भारी बोक्ने, टेम्पो चलाउने, सरसफाई गर्नेहरु सूर्य नउदाउँदै अखबारका सूचनाबाट जानकार भइसकेका हुन्छन् । अझ गरिब भोलि आउने उज्यालोको विश्वासमा वर्तमानको पीडासंग पौंठेजोरी खेल्छ । त्यसैले आजको समाचार उसका लागि भविष्यको मानक हो । स्वभावत उसको अर्जुनदृष्टि समाचारमा केन्द्रित हुन्छ । सामाजिक सञ्जालमा हेर्ने हो भने युरोप अमेरिका र खाडीका नेपालीबीच आकास जमिनको भिन्नता पाइन्छ । युरोप अमेरिका बस्ने र खाडीमा संघर्ष गर्नेहरुको मापदण्ड हुने खाने र हुँदा खाने नै हो । खाडीमा बस्नेको कमाई जीविकासंग जोडिएको हुन्छ भने युरोप अमेरिका बस्नेहरु त्यो देशको नागरिक हुन संघर्षशील हुन्छन् । अपवाद छोडेर देशका लागि पीआरधारीहरु तोरीलाउरे हुन भने खाडीका डोरीलाउरेहरु सच्चा देशभक्त हुन ।
देश सप्रिए विदेशमा बगाउने पसिना र बजार्ने पाखुरी स्वदेशमै उपयोग गर्न पाइने छटपटी उनीहरुमा हुन्छ । ज्यान परदेशमा भएपनि भावना घरमा हुन्छ । नेपालमा छापिने पत्रपत्रिका, सीडी, डीभीडी, अनलाइन पत्रिका, रेडियो, टीभी च्यानलले गर्ने प्रत्यक्ष प्रसारणमा समेत उनीहरुको सक्रिय सहभागिता रहने गरेको छ । एक हातमा गैंती र अर्को हातमा फोन बोकेर स्रोताको कर्तव्य निभाउने तिनीहरुको इच्छाशक्ति साँच्चै प्रशंसायोग्य छ । देशको राजनीतिमाथि खबरदारी गर्न देखि लोकगीतमा छमछमी नाच्न भ्याएकै छन् । समाजमा खालखालका तप्का छ । चौतारीमा कटुसको काँचो पातमा सूर्ति बेरेर धुवाँ उडाउँदै बीपी, पुष्पलालबाहेकलाई नेता नमान्नेदेखि भट्टीमा डोनाल्ड ट्रम्पको राजनीतिक भविष्यबारे पिर गर्नेहरुको संख्या कम छैन् । यी सवै गतिविधिको जमिन भनेको एकाविहानै आमसञ्चारमाध्यमले पस्किने समाचारको गुणस्तर नै हो ।
कृष्णप्रसाद भट्टराई नेपाली राजनीतिज्ञमा बौद्धिक, गीता निर्देशित कर्म गर्ने फलको आशा नगर्ने कर्मयोगी राजनेता हुन । लोभ, मोहबाट आफ्नो राजनीतिलाई निरपेक्ष राखे । तर तिनै कृष्णप्रसाद ‘रक्सी खाने बाहुन’ भनेर २०१५ सालको आमचुनावमा पराजित भए । रक्सी खाने पैसाको जुगाड गर्न संसद जान लागेको भनेर गरेको व्यंग्य पच्न नसक्दा साढे तीन दशकपछि भएको चुनावमा जनमतबाट उनी स्वीकृत हुन सकेनन् । पञ्चायतलाई जसले जतिसुकै सरापे पनि बृद्धबृद्धा लाठी टेकेर, विरामी एम्बुलेन्स चढेर, सुत्केरी बोकिएर, क्रियापुत्री अलग्गै बसेर भएपनि मतदान गर्ने संस्कारको जस त्यही व्यवस्थालाई जान्छ ।
३६४ दिन जसले जति रत्यौली खेलेपनि एकदिन मतदाताले दिने विवेकको मतले मातिएका, पात्तिएका र मर्म परेकाहरुको न्यायोचित व्यवस्थापन हुने गरेको छ । त्यसैले त राजनीतिशास्त्र भन्छ– ‘जनता कहिल्यै गलत हुँदैन ।’ बेलायती इतिहासमा बेइमान राजालाई चिहानबाट निकालेर भाला रोपिएको र अन्यायमा परेका राजाको कंकाललाई गद्दीमा राखिएको इतिहास छ । त्यसैले ख्याल गरौं– अतिले खति ननिम्त्याओस् ।
सरकार समाजशास्त्री प्रधानमन्त्री